कोरोना संक्रमण हुदाँ छालामा कस्तो लक्षण देखिन्छ ? – Rapti Khabar
कोरोना भाइरसले दीर्घरोग, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता समस्या भएकालाई बढी संक्रमण गर्ने कुरामा पुष्टि भैसकेको छ ।
चीनमा कोराना सुरु हुँदा नगण्य मात्रामा (१ प्रतिशत भन्दा कम) छालाको समस्या देखिएको थियो भने इटाली तथा स्पेनमा हालै भएको अध्ययनमा करिब २० प्रतिशत मानिसमा छालाको समस्या देखिएको थियो ।
विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले छालामा हुने समस्याका बारेमा लेख प्रकाशित भइरहेका छन् । अहिलेसम्मका अध्ययन अनुसार छालामा मुख्यतयाः ५ किसिमका लक्षण देखा परेको डा.कमल बताउँछन् ।
हात खुट्टाको टुप्पामा आउने घाउ
यस्तो किसिमको समस्या १९ प्रतिशत बिरामीमा देखिएको थियो । चिलाउने, दुख्ने, साना विमिरा तथा पानी फोका जस्ता घाउ हात खुट्टाको औंलाको टुप्पामा देखिएको छ । यस्ता घाउ किशोरकिशोरी बिरामीमा धेरै आएको तथा चाँडै निको भएको पाइएको छ ।
छालामा डाबर आउने
यो समस्या पनि १९ प्रतिशत बिरामीमा देखिएको छ । यस संक्रमणमा छालामा रातो भुक्क फुलेको डाबर आउने गर्छ । शरीरमा बढी मात्रामा यो देखा परेको समेत पाइएको थियो ।
पानीका फोका जस्ता घाउ
यो समस्या करिब ९ प्रतिशतमा देखिएको छ । यस्तो बेला रातो पानी भरिएको जस्तो घाउ शरीरमा देखिन्छ । यस्तो घाउ कहिलेकाही हात वा खुट्टामा पनि आउन सक्छ ।
साना साना राता दाना जस्ता देखिने घाउ जुन अधिक चिलाउँछ । यस्तो छालाको लक्षण देखा परेमा रोग पनि गम्भिर अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
यसमा छालामा नेट जस्तो रातो वा निलो प्रकारका एलर्जी जस्ता घाउ देखिन्छ । यो खासगरी तिघ्रा तथा खुट्टामा धेरै देखिन्छ । कान्तिपुरको साप्ताहिकबाट साभार
एक महिना अघि धुलिखेलकी एक महिला शल्यक्रिया गरेको घाउ पाकेको समस्या लिएर अस्पताल पुगिन् । २९ वर्षीया ती महिलाले करिब डेढ महिनाअघि शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माएकी थिइन् । अस्पतालले छिटै डिस्चार्ज गरिदियो । घाउ पाकेको थाहा पाएपछि धुलिखेल अस्पताल पुग्दा उनलाई भर्ना नै लिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । उनको नियमित घाउ सफा गरेर घाउ सामान्य अवस्थामा आएपछि घाउ फेरि सिलाउनुपरेको डा. ताम्राकार बताउँछन् । कान्तिपुरको साप्ताहिकबाट साभार
अधिकांश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमितमा केही तथा सामान्य लक्षण मात्र देखिन्छ । थोरै मानिसमा यसको गम्भीर लक्षण पनि देखिन्छ र यो लामो समयसम्म पनि जारी रहन्छ । उनीहरुलाई अत्याधिक थकान, निरन्तरको दुखाइ र श्वासप्रश्वासमा समस्या लामो समयसम्म पनि देखिनसक्छ । लामो समयसम्म यस्ता लक्षण देखिने अवस्थालाई ‘लङ कोभिड’ भनिन्छ । यो प्रभावको कारण सामान्य […]